Dadka reer London ayaa lagu wadaa inay hogaamiyaan soo kabashada safarka firaaqada sanadka soo socda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Dadka reer London ayaa lagu wadaa inay hogaamiyaan soo kabashada safarka firaaqada sanadka soo socda
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Shirarka • News • Dadka • Waajib ah • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka UK
Burburinta magaalada miyay magdhow siin kartaa yaraanta dadka safarka ah ee ganacsiga?
Waa war aad u wanaagsan in macaamiisha London ay u muuqdaan kuwo aad u doonaya inay ka baxaan 2022 - waxay nasiib u yeesheen inay haystaan ​​​​saddex garoon diyaaradeed oo si fiican isku xidhan iyo shabakad tareen caalami ah oo albaabkooda taagan si ay si buuxda uga faa'iidaystaan ​​dib u bilaabista adeegyada Yurub iyo ka baxsan, gaar ahaan sida xayiraadaha safarka ay sii wadaan fududaynta.
Dadka reer London waxay u muuqdaan kuwo u horseedaya waddada qolalka qorraxda xagaaga 2022, maadaama qaar badan oo iyaga ka mid ah ay sheegeen inay ballansan doonaan fasax - waxayna rabaan inay lacag badan ku daadiyaan qorshahooda safarka sanadka soo socda, ayaa daaha ka qaaday cilmi-baaris uu sii daayay maanta (Isniin 1 November) by WTM London.
Waxay sidoo kale ka wanaagsan yihiin masiibada ka dib kuwa kale ee UK oo dhan oo aad u doonaya inay iibsadaan safar dibadeed oo aadka loo seegay, ayaa daaha ka qaaday Warbixinta Warshadaha WTM.
Cilmi baaristu waxay muujineysaa in 28% dadka reer London ay rabaan inay qaataan ugu yaraan hal fasax sanadka 2022 - marka la barbardhigo 22% macaamiisha guud ahaan qaranka. Intaa waxaa dheer, in ka yar hal 10kiiba (9%) ayaa sheegay in aysan ballansan doonin fasax 2022, taas oo aad uga yar tirada 16% ee lagu arkay dalka oo dhan.
Rubuc rubuc ayaa sheegay in ay qarashgareyn doonaan "wax aad u badan" - marka loo eego 20% ama ka badan - marka la barbar dhigo 17% dalka oo dhan, iyo 28% waxay sheegeen inay qarashgareyn doonaan "wax yar" sidii hore - ilaa 20% ka badan - marka la barbar dhigo 25% qaran ahaan.
Sidoo kale, sahanku wuxuu muujiyay in dad badan oo reer London ah ay u muuqdaan inay ka soo baxeen masiibada xaalad dhaqaale oo wanaagsan, maadaama 29% ay sheegeen inay hadda ka wanaagsan yihiin ka hor Covid-19, marka la barbar dhigo celcelis ahaan 19% guud ahaan Boqortooyada Midowday.
Ugu dambeyn, cilmi-baaristu waxay muujisay in dadka reer London ay aad u jecel yihiin inay lacagtooda ku qaataan fasaxyada, iyadoo saddex-meelood laba (66%) ay sheegeen inay lacagtooda dheeraadka ah ku bixin doonaan fasax, marka la barbardhigo celcelis ahaan 63% guud ahaan dalka.
Cilmi-baadhistu waxay si fiican u soo kabsanaysaa soo kabashada warshadaha safarka ee Ingiriiska, iyada oo soo jeedinaysa inay jirto baahi xooggan oo loo qabo ka bixitaannada masiibada ka dib maadaama xannibaaduhu ay fudud yihiin, fursado badan oo korriin ah oo ka imanaya macaamiisha caasimadda.
Tani waxay si fiican ugu mahadcelin kartaa doorashada ballaaran ee duulimaadyada iyo safarka tareenka, maadaama reer London ay ka safri karaan seddex xarumood oo caalami ah - Heathrow, Gatwick iyo Stansted - iyo saldhigyada sida St Pancras International ee adeegyada Eurostar.
Arrin kale ayaa noqon karta dib u soo kabashada garoommada ka baxsan London iyo koonfur-bari ee Ingriiska, taasoo la micno ah in fasax-qaateyaal badan oo gobollada ah ay leeyihiin xulashooyin ka yar ka hor masiibada.
WTM London, oo ah hormuudka dhacdada caalamiga ah ee warshadaha safarka, waxay ka dhacaysaa saddexda maalmood ee soo socda (Isniinta 1 - Arbacada 3 Noofambar) ee ExCeL - London.
Simon Press, Agaasimaha Bandhigga WTM ee London, ayaa yidhi: "Waa war aad u wanaagsan in macaamiisha London ay u muuqdaan inay aad u jecel yihiin inay ka baxaan 2022 - waxay nasiib u yeesheen inay haystaan ​​​​saddex garoon diyaaradeed oo si fiican isugu xidhan iyo shabakad tareen oo caalami ah oo albaabkooda ku yaal si ay u awoodaan. si fiican uga faa'iidayso dib u bilaabista adeegyada Yurub iyo meelo ka baxsan, gaar ahaan iyadoo xannibaadaha socdaalku ay sii yaraanayaan.
"Waxaan rajeyneynaa in dib u soo kabashada suuqa xilliga firaaqada ay awood u siin doonto garoomada diyaaradaha inay dib u dhisaan shabakadooda isla markaana ay awood u siiso fasax-qaateyaal badan oo UK ah inay ballansadaan fasax dibadeed iyaga oo aan u safrin meel fog madaarka ay ka dhoofayaan."